“Gooolkii koowaad ee Ronaldo wuxuu ahaa nasiib, laakiin kan labaad waa mid cajiib ah”… Allegri – Gool FM
(Juventus) 16 Sab 2018. Macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay in dhaqan xumida Douglas Costa uu kula kacay xidiga kooxda Sassuolo inay tahay midaan la qaadan kaarin.
Massimiliano Allegri ayaa dhinaca kale tilmaamay in Cristiano Ronaldo uu ahaa mid aad u dhaqsi badan si uu u dhaliyo gool, lakiin ugu dambeyn wuxuu ku guuleestay inuu gaaro shabaqa gaaro, inkastoo goolkiisa ugu horeeyay uu ahaa mid ah.
“Waxaa laga yaabaa in Douglas Costa uu ka xanaaqay qalad horey u dhacay, laakiin taasi muhiim ma ahan, laakiin waxa uu sameeyay ma ahayn inuu sameeyo”.
“Hadii aan ku laabano seddexdii kulan ee hore, waxaan daawanay sida Cristiano Ronaldo uu ugu dhawaa inuu gool dhaliyo, Maanta, sidoo kale xoogaa “wuxuu ahaa mid xoogan”.
“Goolka koowaad wuxuu ahaa mid nasiib ah, kubada waxay ku dhacday birta kadib waxay u soo laabatay isaga si uu u dhaliyo goolkiisa ugu horeeyay inkastoo uu ahaa mid nasiib ah, laakiin goolka labaad wuxuu ahaa mid cajiib ah”.
Cristiano Ronaldo ayaa xusid mudan in kulankii Sassuolo uu dhlaiyay 2 gool, taasoo ka dhigtay inuu furtay akoonkiisa goolasha ee kooxda Juventus tan iyo markii uu yimid suuqan xagaaga.
“Mohamed Salah waa inuu noqdaa kaligii taliye”… Halyayga kooxda Liverpool Robbie Fowler